Hay?adaha IOM iyo UNDP Somaliya oo diyaariyey koox dib u soo celinaysa khubadarada Jaaliyadaha Dibadda. – Radio Daljir
Hay?adaha IOM iyo UNDP Somaliya oo diyaariyey koox dib u soo celinaysa khubadarada Jaaliyadaha Dibadda.
Nairobi, Sept 16 – WAR-SAXAAFADEED – Hay?adaha IOM iyo UNDP Somalia oo diyaariyey koox dib u soo celinaysa khubadarada jaaliyadaha Dibadda.
Hay?adaha Qaramadana ee Horumarinta Barnamijyada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya(UNDP) iyo Hay?adda Socdaalka Caalamiga ah(IOM), ayaa waxay maanta wadajir ahaan u soo bandhigayaan hindise oo lagu diyaarinayo khubaro farsamo oo ka tirsan jaaliyadaha Soomaalida dibadda ku dhaqan, si ay gacan uga gaystaan dib-u-dhiska arrimaha asaasiga ah ee maamul-wanaagga qaybo ka mid ah dalka.
Khubaro farsamo Soomaaliyeed oo ku-xeel-dheer – arrimaha Horumarinta Socdaalka Afrikaanka (QUESTS-MIDA), ayaa ka qaybqaadan doona mashruucan oo bartilmaameedkiisu yahay in dadka Soomaalida ah ee khibradda u leh dhinacyada siyaasadda iyo sharciga, kuna dhan waqooyiga Ameerika, Boqortooyada Ingriiska(UK) iyo waddamada islu yiraahdo Nordic Countries, ay hawlahaas gacan ka gaystaan. Waxayna khibaradu ka hawlgeli doonaan mashaariicda maxaladda gaaban ee ku wejahn awoodaynta dhinaca maamulka oo laga hirgelin doono qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya, waxaana masharuucaas loogu talo galay muddoo cel-celis ahaan dhan qiyaastii muddo lix bilood ah, si ay gacan uga siiyaan tababarada xir-fadeed ee shaqoojinka loogu abuurayo qaybaha bulshada, iyadoo la tixgelinayo goobaha ay ka faa?iidaysayaashu ku dhaqan yihiin.
Maaraynta haboon ee maaliyadda dawladda, ayaa waxay ka mid tahay goobaha loo baahan yahay in bartilmaameedyada mudnaanta leh lagu daro, taasoo xilligii labaatameeyada sano gaarayey ee colaaddu dalka ka jirtay si weyn waxyeello ula soo gudboonaatay, madaama waaxyaha ay ka mid yihiin; dhaqaalaha aan rasmiga ahayn intiisa badan uusan lahayn qaab-dhismeed gacansi sida; la socoshada deeq-bixiyayaasha., uruurinta canshuuraha, mushaaraadka ciiamadda ammaanka ama xitaa sida loo jaangoyn karo xaddiga qiyaasta ugu sarraysa ee hal Bilyan oo doolarka Maraykanka ee sannadkiiba ka soo xaroota xawaaladaha dalka
Waxayna Barnaamijyadani kaabayaan dadaallada hay?adda UNDP ee afartii sano ee la soo dhaafay, iyadoo lala kaashanayo adeegyada farsamo ee khubarada xeel-dheerayaasha Soomaalida (QUESTS) , Hay?adda IOM, ayaa iyaduna barnaamijkan ebyi doonta, iyadoo la kaashanaysa waaya-aragnimada iyo khubarada, hore u sii ambaqaaday hay?adaha Horumarinta dhinaca socdaalka Afrika (MIDA), waxaana hindisahan iyo shabakadihiisa ergooyinka waddamada kala duwan looga golleeyahay in ay ka qaybqaadan doonaan khubaro Soomaaliyeed oo ku xeel-arri amrrtimahaas iyaga ah.
Faahfaahin dheeraad ah fadlan soo booqo: http://www.quests-mida.org ama la soo xidhiidh: Kaltun Hassan, Khabiirka Arrimaha Warbaahinta Hay?adda UNDP Somalia, , Tel: +254 726 891851 ama email: [email protected]
Hay?adda Barnaamijyada Horumarinta qaramada midoobay ee Soomaaliya (UNDP Somalia) waxay la hawl-galayaashahay?ado kala duwan siu ay u xaqiijiso hadafka nabadaynta iyo sugidda ammanka qaranka, kaasoo fursad u ah in muwaadinkasta oo Soomaaliyeed uu helo nabad wacan.
UNDP waxay ka taageertaa dadka soomaalida dhinacyada: Maamulka dimuqraadiyada, Ku dhaqanka sharciga iyo kala dambaynta, Dib-u-soo-kabashada iyo taabbagelinta Heer-nololeedka, Horumarinta xuqquul-insaanka iyo arrimaha dhaqaalaha iyo la dagaallanka ka dhanka ah HIV/AIDS-ka.
Hay?adda Barnaamijyada qaramada midoobay (UNDP) waa Shabakadda horumarinta Caalamiga ah Qaramada Midoobay?. Waxayna UNDP xarumo ku leedahay 166 waddan..
Hay?adda IOM, waxaa ka go?an meel marinta qawaaniinta adaadaminnimada, islamarkaana in si dhab ay ay uga faa?iidaystaan nidaamka socdaalka dhammaan dadkaqaxootiga ah iyo qaybaha bulshada. Maadaama ay yihiin hay?ado isky-dhafan dhinaca hawlgalka, waxay IOM la hawlgashaa beesha caalamkasi ay markaas: u caawiso shirarka hawlgalka caqabadaha qaxootiga, kobcinta fahamka arrimaha dhinaca socdaalka la xiriira, dhiirrigelinta arrimaha bulshada iyo horumarinta dhaqaalaha, iyadoo loo sii marayo dhinaca socdaalka, islamarkaana waxay ka shaqaysaau shaqaysaa hawlaha ku wejahan xurmaynta dhabta ah eesharafta bini?aadmiga iyo habsida nolosho dadka haybaddaqaards.
Hay?adda IOM wxaa lagu asaasay meel ka baxsan Nidaamka QM 1951, waxayna imminka xubno ka ah 125 waddan. http://daljir.com/